Usoro Inbound Marketing | Martech Zone
Mmetụta imepụta na imepụta ejirila ihe ọmụma mara mma, Usoro Inbound Marketing nke ahụ chịkọtara usoro ahịa inbound na usoro 6. Inbound Marketing bụ usoro dị mgbagwoju anya - yana ọtụtụ ịdabere n'etiti ọwa, yabụ ọ dịghị mfe ịnweta usoro dị mfe dịka nke a.
Inbound Marketing nwere ike bụrụ usoro mgbagwoju anya na nnukwu usoro. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ime ka ọ dị mfe dịka o kwere mee, wee wetara gị nsonaazụ ị na-achọ. Lelee usoro anyị mepụtara iji nweta ebumnuche Inbound Marketing.
Naanị ihe m ga-agbakwunye bụ ịnwale na akaghị site na nzọụkwụ 6 iji kwụpụ 1. Inbound marketing na-achọ nnwale iji hụ na mgbalị dị oke mkpa ị na-etinye na-enwe mmetụta dị mma na ị na-anwale ozi dị iche iche, ọwa dị iche iche, na onyinye dị iche iche. Akụkụ ọzọ na-efu bụ akaghị site na mmụba iji meziwanye usoro ahịa gị. Chọpụta ihe na-arụ ọrụ kwesịrị ịchụpụ mbọ mbọ ị na-agba n’ahịa!
Tags: Nzọụkwụ 6 iji banye ahịainbound marketinginbound ahịa infographicinbound ahịa usorondu nurturingA
Etu esi ewepu ibe maka ochicho ime obodo
Nov 30, 2012 na 5:46 AM
Ire ahia Intaneti abatala kpamkpam.
Ndị mmadụ na - achọ azịza gị ma ha chọọ ntanetị. Ha chọrọ
ozi dị mkpa banyere ihe ha na-achọ. Ha kpọrọ
ndị na-ere ahịa n'ọnụ ụzọ ha.